Fampianarana: betsaka ireo te hianatra any Etazonia | NewsMada
Fampianarana: betsaka ireo te hianatra any Etazonia
Taorian’ny fahafaham-panadinana bakalorea, betsaka ireo tanora mitady vatsim-pianarana hianarana any ivelany. Anisan’ny be mpifidy ny any Etazonia. Sady firenena mandroso no ahitana karazana lalam-piofanana maro tsy hita eto amintsika. Mbola hafa sy misongadina ihany koa ireo mpianatra nivoaka tany Etazonia ary mahazo tombony manokana eny anivon’ny orinasa. Anisan’ny mahasarika ny tanora hianatra any avokoa izany.
Raha te hianatra any Etazonia anefa, mila mahafantatra tsara ny lalam-piofanana tiana hianarana sy hifantohana. Tokony hahafantatra ny asa hatao aorian’izany fianarana izany. Ilain’ny firenena malagasy sa tsy ilaina ny traikefa norantovina tany sao tsy hiteraka voka-tsoa eto an-tanindrazana akory…
Rahampitso manomboka amin’ny 12 ora antoandro hatramin’ny 12 ora alina, hisy solontena avy amin’ny oniversite amerikanina 80 mahery hitafa mivantana mandritra ny foara lehibe momba ny fianarana ambony amin’ny College Week Liveon ary azon’ny tanora malagasy rehetra ametrahana fanontaniana. Mila misoratra anarana amin’ity adiresy ity ireo te handray anjara amin’izany: IEW2018EdUSA.CollegeWeekLive.com.
Marihina fa afaka sady miasa no mianatra ireo mpianatra avy amin’ny firenen-kafa mandranto fianarana any Etazonia. Araka ny lalàna amerikanina momba ny fifindra-monina, afaka miasa tapak’andro na 20 ora isan-kerinandro ny mpianatra mandritra ny fotoam-pianarany.
Afaka miasa hatramin’ny 40 ora isan-kerinandro ihany koa izy mandritra ny fotoam-pialan-tsasatra. Tanjona amin’izany ny hahafahan’ny mpianatra mandoa ny vidina boky fianarana mety ilainy na ny fitafiany na koa hanefany ny fandaniany hafa ny karama azony amin’izany.
Maro ireo tanora malagasy mandranto fianarana any Etazonia, saingy nahazo vatsim-pianarana ny ankamaroan’izy ireny.